၈၈ မျိုးဆက်ဆိုတော့ ကောင်တွေကို တခုတော့မေးချင်တယ် ~ Myanmar Express
ယနေ့နံနက်က ကျွန်ုပ်သည် မြန်မာ မွတ်စလင်ထိုင် ပေါ်တွင် ထိုင်နေစဉ် မြန်မာ မွတ်စလင် သူငယ်ချင်း တစ်ဦးက လာခေါ်သဖြင့် ဖဲရိုက်ရန် သွားခဲ့သည်။ ဖဲဝိုင်းတွင် ဖဲများကို မြန်မာ မွတ်စလင်ဖန် ထိုး၍ ကစားနေခိုက် အိမ်ရှင်က ပဲမြန်မာမွတ်စလင်ဟင်းဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံရာ စား၍ အလွန်ကောင်းခဲ့သည်။ မြန်မာမွတ်စလင်ပဲများက စား၍ အလွန်ကောင်းသလို မြန်မာမွတ်စလင် အော်သီးများ ထည့်ချက်ထား၍ အလွန်စပ်လှသည်။ အအီပြေစေရန် သရက်သီး မြန်မာမွတ်စလင်တည် ဟင်းဖြင့် ဧည့်ခံသေးရာ လိုက်ဖက်လွန်းလှသည်။ မြန်မာ မွတ်စလင်လေး မဆလာခပ်ထားသည့် ဟင်းများကလည်း မွှေးကြိုင်နေသည်။ ဖဲဝိုင်းတွင် ငွေအနည်းငယ် နိုင်ခဲ့သော်လည်း ကိုယ့်ဘာသာ စားရင်း သောက်ရင်း ကုန်သွားသည်။ ဒါကြောင့် “မြန်မာ မွတ်စလင် ခပ်တဲ့ရေ မြန်မာ မွတ်စလင် ဖင်ဆေးတာနဲ့ကုန်”ဆိုသည့် စကားပုံ ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်မည်။ ပိုက်ဆံမရှိသောကြောင့် စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် တိရစ္ဆာန်ရုံထဲ ၀င်ထိုင်ရာ လည်ပင်း ရှည်လွန်းသော သစ်မြန်မာမွတ်စလင်အုပ် ကြီးများကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ (ဖဲဝိုင်းတွင်မြန်မာမွတ်စလင်သုံးကောင်ဖဲချပ်များမတက်သောကြောင့်ရှုံးရသဖြင့် တိရစ္ဆာန်ရုံတွင်စိတ်ညစ်ညစ်ဖြင့် မြန်မာမွတ်စလင်သေမြန်မာမွတ်စလင်မောအိပ်လိုက်လေသည်)ကုလားကို ကုလား ဟု မခေါ်ရန် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မွတ်ဆလင် ကြက်ကုလား မြအေးက ပြောလိုက်ပါတယ်။၈၈ မျိုးဆက်ဆိုတော့ ကောင်တွေကို တခုတော့မေးချင်တယ်ခင်းဗျားတို့ က ရခိုင်မလေး လူမဆန်စွာ အနိုင်ကျင့်တုန်းကတော့ေ-ာက်သံမထွက်ဘဲ ခုမှ ခင်ဗျားတို့ ပထွေးတွေ ထိမှ စောက်သံထွက်လာတာ ဘာသဘောလည်း။မင်းကိုနိုင်ဆိုတဲ့ ကောင်ရုပ်ကိုကြည့်ကုလားသွေးပါမှန်စောက်ရမ်းသိသာတယ်။ရိုင်းရိုင်းပြောသင့်တာမို့ပြောပြီ ရခိုင်သုလေးကိုသတ်ခံရတဲ့အချိန်တုန်းက မင်းတို့ ပါးစပ်ပေါက်တွေ ဘယ်ကြားထဲရောက်နေလဲ သတ်တာမှ မဒိန်းကျင့်ပီးတော့ လည်လှီး မသေမချင်းသတ်တာ ပီးတော့ဘယ်မီဒီယာ ဘယ်ဂျာနယ်မှာမှ ပါမလာဘူး နောက်ဆုံးရိုင်းရိုင်းတခုထပ်ပြောမယ် ကုလား ကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဒီလိုမှ မလုပ်ခဲ့ရင်......သေချာတာကတော့ ကုလားတွေဟာ ရိုးမကိုကျော်ပီး ခုချိန်ဆို မင်းတို့ရဲ့ပထွေးတွေ ဖြစ်နေလောက်ပြီ။ ဒါပဲ။ဟင့်အင်း.. ဟင့်အင်း....တားက ကျောင်းတားပဲရှိသေးတာဆို....အသက် ၅၀ ကျော်လည်း ကျောင်းတားပဲ... Myanmar Express
Posted in: ဘာလဲဟဲ့ ရှစ်လေးလုံး,သတင်း,မြန်မာ-ကုလား အဓိကရုဏ်းများ
ထောက်ခံပါတယ်... စောက်မေလိုးတွေက မြန်မာနိုင်ငံကို တခြားစောက်ကုလားတွေကြီးစိုးနေတဲ့ နိုင်ငံ လိုဖြစ်စေချင်နေကြတာ အသိသာကြီး ဒါမှ သူတို.တွေစောက်ရေးလုပ်ခံရမှာ Hero ကြီး ဖြစ်ချင်တာလေ... ဒီလိုအသတ်ခံနေရတာ မသိပဲသေသွားတဲ့သူတွေလဲ အများကြီး ရှိကြအုံးမှာပဲလို. ယူဆမိတယ် စောက်ကုလားတွေကို နိုင်ငံထဲက နှင်ထုတ်သင့်နေပြီ...စောက်ကုလားတွေ....ဗလီကြီးတွေတဖြဲနဖြဲစောက်ပြီး အခု ထပ်ပြီး စောက်ကန်းတက်ချင်နေကြတာ စောက်မေလိုးတွေ
7 June 2012 12:35
မြန်မာ မွတ်ဆလင် လီးကိုကော မမြည်းခဲံဘူးလား
7 June 2012 12:58
excellent,i really like it. myanmar muslim thike tiger win kite tha lo nar thwar bi...
7 June 2012 13:13
ရေသောက်ပြီးပြောတဲ့ မြန်မာမွန်စလင်(ခေါ်) ခွေးကုလားမြအေး များနေပြီ ဦးရာဇတ်က ကုလားဖြစ်နေတောင်မှ နိုင်ငံအတွက် ကောင်းကျိုးလုပ်ခဲ့တာကွ။ သောက်ရေးမပါလာပြီး ယှဉ်နေသေးတယ်။ မင်းတို့ခုခေတ်ခွေးကုလားတွေက နိုင်ငံအတွက်ဘာများ လုပ်ပေးခဲ့တုန်း။ မင်းတို့ကုလားတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေတာကြာပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကောင်းကျိုးတစ်ခုကော လုပ်ဖူးရဲ့လားခွေးကုလား။ များနေပြီမင်းတို့ကောင်တွေ နိုင်းယှဉ်တယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ဒြပ်ချင်းတူမှ ယှဉ်ကွ နားလည်လား။
7 June 2012 15:31
ဒီကောင်တွေက မေတ္တာရပ်ခံချက်ထုတ်ရအောင် ဘာကောင်တွေမိုလို့လဲ...အဲဒီလိုသာထုတ် ကြေးဆိုရင် ဟိုအသင်း..ဒီအသင်း...အကုန်ထုတ်ကြတော့မှာပေါ့...အခုကျမှ ဟိုလိုပြော....ဒီလိုပြောနဲ့...နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုလည်း...တရားဝင် ပါတီထောင်ပြီးလုပ်လေကွာ...ဘာလဲ..ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း....ဘာကိုပွင့်လင်းပြီး...ဘာလူ့အဖွဲ့အစည်းရမှာလဲ....မင်းတို့က ဘာကောင်တွေလဲ...အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တတ်ရုံနဲ့...ဟုတ်လှပြီထင် နေလား...လူတိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့ ကိစ္စတွေပါကွာ.....မင်းတို့လို...၁၀၉..၁၁၀ တွေသာ ဒီအလုပ်တွေလုပ်တာ...မင်းတို့..ပရဟိတ ဘာလုပ်ဖူးလဲ...ကျောင်းမှာတုန်းကကော ဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြလဲ....သိပ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်...ပြောမနေနဲ့..တော်တော်ေ-ာက်မြင်ကပ်နေပြီနော်...
7 June 2012 15:36
မြအေးတို့ မင်းကိုနိုင်တို့ မင်းတို့ နှမတွေအမေတွေ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ပေးစားလိုက်ကြ။ မင်းတို့ပါ ဒီတိုင်းပြည်ထဲကထွက်ကြ ၊မထွက်ရင် ထောင်ထဲပြန်ဝင်နေကြ။
7 June 2012 17:06
အချိန်တန်တော့လည်း စောက်ကုလားက စောက်ကုလား ပါပဲကွာ။ မြန်မာပြည်လာပြီး ဖင်ခေါင်းကျယ်မနေပါနဲ့။ မြန်မာပြည်မှာနေရင် မြန်မာ လွှမ်းမိုးတာ ခံရမှာပဲ။ မင်းစောက်ကုလားတိုင်းပြည်တွေမှာရော မြန်မာတွေကို အရေးပေးလို့လား။ ဆယ်ယောက်သေရင် ဆယ်ယောက်သေတယ်လို့မှတ်။ လျှာမရှည်နဲ့။ ထပ်နာသွားမယ်။ နိုင်ငံရေး ရောင်ရောင် ဒီမို ရောင်ရောင် nld ရောင်ရောင်ကောင်တွေလည်း တိတ်တိတ်နေ။ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှ လူမျိုးရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင် ပွင့်လင်းစရာလည်းမလိုဘူး။ မျှတစရာလည်း မလိုဘူး။ သူများအိမ်မှာ နေရင် အိမ်ရှင်ညိုညင်အောင်မနေရဘူး ။ ဒါမျိုးဖြစ်လာရင်တော့ ဗျင်းရမှာပဲ။ မခံနိုင်ရင် နင်းသတ်ခံထိသွားမယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်မလုပ်ခဲ့တဲ့ ၈၈ စောက်ရူးများ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ စော်ကားတဲ့ကောင်တွေကို မတောက်တစ်ခေါက်သိထားတဲ့ ဒီမိုခေါင်းစဉ်တွေအကြောင်းပြပြီး ကာကွယ်ဖေးမနေမယ် ဆိုရင် .......... ကိုယ်မအေကိုလိုးပြီး ရောင်းစားနေတဲ့ကောင်တွေ မင်းတို့ပါ မသာပေါ်သွားမယ် မှတ်ထား ............
7 June 2012 18:44
ရခိုင်သုလေးကိုသတ်ခံရတဲ့အချိန်တုန်းက သူတို့ ပါးစပ်ပေါက်တွေက မြန်မာမွတ်စလင်လီးကို ဆို့ထားလို့ အသံမထွက်တာလေ
7 June 2012 18:45
MEGရေ...မနဲ့မောင် ဇာတ်လမ်းလေးတွေကို လုပ်ပါဦး...
7 June 2012 19:11
ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှ လူမျိုးရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင် ပွင့်လင်းစရာလည်းမလိုဘူး။ မျှတစရာလည်း မလိုဘူး။ သူများအိမ်မှာ နေရင် အိမ်ရှင်ညိုညင်အောင်မနေရဘူး ။ ဒါမျိုးဖြစ်လာရင်တော့ ဗျင်းရမှာပဲ။ မခံနိုင်ရင် နင်းသတ်ခံထိသွားမယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်မလုပ်ခဲ့တဲ့ ၈၈ စောက်ရူးများ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ စော်ကားတဲ့ကောင်တွေကို မတောက်တစ်ခေါက်သိထားတဲ့ ဒီမိုခေါင်းစဉ်တွေအကြောင်းပြပြီး ကာကွယ်ဖေးမနေမယ် ဆိုရင် .......... ကိုယ်မအေကိုလိုးပြီး ရောင်းစားနေတဲ့ကောင်တွေ မင်းတို့ပါ မသာပေါ်သွားမယ် မှတ်ထား ............
7 June 2012 23:05
ဘာပဲပြောပြော ၈၈ တွေ နပ်လာပြီခဏခဏရုန်းရင်းဆန်ခတ်အကြမ်းဖက်ရင်တော့စစ်တပ်က ၀င်လိမ့်မယ်မကြာဘူး ကြည့်နေလူစုမခွဲလည်းကောင်းတယ်ဒီသောက်ရူးတွေနဲ့ စစ်တပ်နဲ့ပဲတန်တယ်ဆန္ဒတွေခဏခဏပြနေတာ မျက်စိရှုပ်နားရှုပ်တယ်ဟေ့ဝင်သင့်ရင်ဝင်တော့ ကြာတယ်
8 June 2012 01:43
http://koaungpaing.comJune 7, 2012 11:01 AMကုရန်အာန်ကျမ်း ဟာ ဘာသာရေးစာအုပ် ထက် တရုတ် စစ်သေနင်္ဂဗျူဟာကျမ်းလိုမျိုး ကျမ်းဖြစ်တယ်ဘက်ပေါင်းစုံက ထောင့်စေ့အောင် ဘယ်လို ဗျူဟာတွေ သုံးရမလဲဆို တာ ပြည့်စုံတဲ့ သေနင်္ဂဗျူဟာကျမ်းမျိုးဖြစ်တယ်တရုတ် စစ်သေနင်္ဂဗျူဟာကျမ်းလို တိုင်းပြည်တစ်ပြည် ကို ဘယ်လို ထိုးဖေါက် ၀င်ရောက်မယ်ကိုယ့်အင်အား မကောင်သေးခင် မှာ ရန်သူဘာသာခြားတွေကို ဘယ်လိုလိမ်ညာရမယ် ဘယ်လိုအင်အားကောင်းအောင် ကျိတ်မွေးရမယ်လူပွားဖို့ အတွက် အရေးကြီးတဲ့ မျိုးပွားသူ(မိန်းကလေး)တွေ ကို ကိုယ့်ဘက် က မိန်းမတွေ ကို ရန်သူဘာသာခြားတွေ နဲ့မယူမိအောင် သော့ခတ်ပြီး သိမ်းထားရမယ်။တစ်ဘက် က နေ ရန်သူဘာသာခြားတွေရဲ့ မိန်းကလေးတွေ ကို ရသလောက် ယူရမယ်( ကိုယ့်ရဲ့ မွတ်စလင်မ် အင်အား ကောင်းလာစေသလို၊ တစ်ဘက် က ရန်သူ့ဘာသာခြားအင်အား နည်းသွားရမယ်) တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ကိုယ့်လူ မွတ်စလင်မ် အချင်းချင်း ညီညွတ်ရမယ်၊ မွတ်စလင်မ် စာသင်ကျောင်းတွေ အစည်းအဝေးတွေ၊ သဘောတရားရေးရာ သင်တန်းတွေ မတက်မနေရ၊ လူငယ်တွေကို မွတ်စလင်မ်စိတ်ဓာတ်ကို ရိုက်သွင်းမယ် ၊ အဆင့်ဆင့် ကွပ်ကဲအုပ်ချူပ် ရမယ်၊ မွတ်စလင်မ် ခေါင်းဆောင်တွေချပေးတဲ့ စကားကို နားထောင်ရမယ်အင်အားမကောင်းသေးခင် ရန်သူဘာသာခြားတွေက မျက်နှာကိုတံတွေးနဲ့ ထွေးရင်တောင် သည်းခံပြီး အင်အားကောင်းလာတာနဲ့ရန်သူဘာသာခြားတွေကို တစ်ခါတည်းလုပ်ရမယ်၊ အပြတ် လုပ်ရမယ် ကိုယ့်လူ မွတ်စလင်မ် အချင်းချင်း network လုပ်ရမယ် အမြဲတမ်း စည်းဝေး တိုင်ပင်လုပ်ရမယ်ကမ္ဘာ ပေါ်က ညီအစ်ကို မွတ်စလင်နိုင်ငံ ဆော်ဒီ၊ ကာတာ၊ တို့ နဲ့ အမြဲ network ရှိမယ်လက်ရှိဘယ်နိုင်ငံမှာ မွတ်စလင်လူအင်အားတော့ရှိပြီ။ ဒါပေမယ့် ငွေကြေး၊ မီဒီယာလိုမယ်၊ဖြစ်တယ် ညီအစ်ကို မွတ်စလင်နိုင်ငံ ဆော်ဒီ၊ ကာတာ၊တို့ က ထောက်ပံ့ပေးမယ်၊ အခြေအနေကို တင်ပြ၊အချက်အချာ ကျတဲ့ နေရာတွေကို ယူထားရမယ်။ ကိုယ့်လူမွတ်စလင်မ် တွေချည်း ပဲ ရပ်ကွက် မြို့နယ်ဖြစ်ရမယ်၊ ရန်သူ(ဘာသာခြား) တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဖြည်းဖြည်းချင်း ရှင်းထုတ်ရမယ်။စီးပွားရေးမှာ ၇၈၆ ကိုယ့်လူ မွတ်စလင်မ် အချင်းချင်း အားပေးရမယ်၊ ကိုယ့်လူ မွတ်စလင်မ် ထဲက ငွေ ရန်သူဘာသာခြား ဆီ မရောက် စေဖို့ ။အစစ အရာရာ အားလုံးမှာ အစိုးရ အရာရှိတွေ ၊ လိုအပ်သူတွေ ကို သည်းခံပြီး ပေါင်းမယ်။ မှတ်ထားပါငါတို့မွတ်စလင်မ် တွေရဲ့ ဦးတည်ချက် ဟာ တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်၊ အဲဒီပန်းတိုင် မရောက်မချင်း အားလုံးကို သည်းခံရမယ်၊ ငါတို့အားလုံးဟာ ကိုယ်ကျိုးအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်၊ အဓိက အချက် က မွတ်စလင်မ် မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေ များများ မွေးဖို့ ပဲရေရှည် စစ်ပွဲဖြစ်တယ်၊ သားမြေး မျိုးဆက်နဲ့ ချီတိုက်ရမယ်၊ နောက်ဆုံး ငါတို့ သားမြေးတွေ ခေတ်မှာ ရန်သူဘာသာခြား နိုင်ငံကို ကိုယ့်လူ မွတ်စလင်မ် တွေ သိမ်းပိုက်နိုင်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာ တိုင်းနိုင်ငံရှိသမျှ အသီးသီးတို့ ဟာ အလာအရှင်မြတ် အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ငါတို့ မွတ်စလင်မ်တွေ ဟာ ဘာသာရေးစစ်မြေပြင် က စစ်သားတွေပဲဖြစ်တယ်ငါတို့သေသွားခဲ့ရင်တောင် ငါတို့ သားမြေးမွတ်စလင်မ်တွေ အတွက် ခြေကုပ်ရယူပေးခဲ့ရမယ်Allahu....Akbarr ....Allahu...Akbarr....Allahu...Akbarr....Allahu..Akbarr..ReplyReplies
8 June 2012 08:23
I support Rakhine.
8 June 2012 13:00
mya aye southkalar
အခုလို ယုတ်ညံ့တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ ရှိနေသမျှ ဘယ်တော့မှ မတိုးတက် နိင်ပါ
8 June 2012 20:53
NLD ၇ဲ့ နောက်ဆုံး သတင်းများ အ၇ ကိုမြအေး တယောက် ငယ်ရွယ်စဉ် အခါက မိန်းမ လိုက်စားထားမူ့ များကြောင့် အခု ယောက်ကျား တန်စာမှာ ပြင်းထန်တဲ့ များပြားလှစွာသော ယားနာလို့ ခေါ်သော ၀ဲခြောက်များ ပေါက်ေ၇ာက်နေကြောင်း သတင်း ၇၇ှိထားပါတယ်
ဖုန်းလိုင်းကျပ်မှု ကြုံလျှင် သက်ဆိုင်ရာ အိတ်ချိန်းမှ ဖြေရှင်းပေးမည်
တန်ဖိုးနည်းဖုန်းများ ရောင်းချပြီးနောက် ဖုန်းလိုင်းကျပ်တောက်မှု အချို့ ဖြစ်ပေါ်နေရာ ထိုသို့ ဖုန်းလိုင်း အဆင်မပြေမှုများ ရှိပါက မိမိကိုင်ဆောင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်အလ...
[image: အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ် McConnell နဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တို့ နေပြည်တော် သမ္မတရုံးမှာ တွေ့ဆုံစဉ် (၁၇ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀၁၂)]
မြောက်ကိုးရီးယားက စစ်တပ် အရာရှိတွေ တရုတ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်
တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်နိူင် ဖို့ မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ အစိုးရကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို မြောက်ကိုးရိးယားေ...
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဟောပြောပွဲနှင့် စွမ်းအားမြှင့် မီးဖို လှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပ
[image: သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဟောပြောပွဲနှင့် စွမ်းအားမြှင့် မီးဖို လှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပ]
ရွှေဘို မေ ၂၂ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ရွှေဘိုခရိုင် အပူပိ...
အသည်းကြား မှ ရိုးသားသည့်Touch Click သန်းပေါင်းများ တို့၏ မြစ်ဖျားခံရာ သို့မဟုတ် National Spirit အခု Photo မှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ ---> Myanmar Faceboo...
US နှင့် UK မပါဘဲ အစိုးရနှင့် KIO မေလကုန်ပိုင်း မြစ်ကြီးနား တွင် တွေ့ဆုံမည်
အစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)တို့ လာမည့်... မြစ်ကြီးနားမြို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် လေ့လာသူအဖြစ် US နှင့် UK အစား တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၉ ...